फेसबुकका प्रयोगकर्ता २ अर्बनजिक, एकवर्षमै बढे ८ करोड !
काठमाण्डौ । फेसबुकका प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब नजिक पुगेको छ । कम्पनीले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक महिना फेसबुक प्रयोग गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको बताएको छ । घोषित तथ्यांक अनुसार हाल विश्वभरि फेसबुकका प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब ९४ करोडको उचाईमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा फेसबुकको विश्वभर १ अर्ब ८६ करोड...
फेसबुकमा यो गेम नखेल्नू, बर्बादीमा परिएला नि !
काठमाण्डौ । फेसबुकमा हिजोआज एक नयाँ सुरक्षा जोखिम निकै चर्चामा छ । तीव्र गतिमा फैलिरहेको एक फेसबुक फिचर्सको माध्यमबाट मानिसहरुसँग केही प्रश्न सोधेर उनीहरुका गोप्य जानकारी चोरी हुने काम भइरहेको छ । मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार यो एक खेलको शैलीमा भइरहेको छ । यसमा तपाईले ती १० कन्सर्टहरुको नाम फेसबुकमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ तपाई सहभागी...
तपाई सोच्नुहोस् मात्र किबोर्डले टाइप गर्न थाल्नेछ........!
काठमाण्डौ । फेसबुकले यस्तो प्रविधिमा काम गरिरहेको छ, जसबाट तपाईले तपाईको कम्प्युटरलाई आफ्नो दिमागले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ । त्यति मात्र होइन, दिमागले नै टाइप समेत गर्न सक्नेछ । यो सफ्टवेयरलाई ‘साइलेन्ट स्पीच’ भनिएको छ र यसको सहायताले मानिसले १ सय शब्द प्रति मिनेटको स्पीडमा टाइप गर्न सक्नेछन् । यो परियोजनाको सुरुवातमा...
गुगल र फेसबुकमा खुल्यो जागिर, यसरी भर्ने आवेदन
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा राम्रो कम्पनी गुुगल र फेसबुकमा काम गर्ने सपना विश्वका लाखौं मानिसले देखिरहेका हुन्छन् । यी कम्पनीहरुमा काम गर्नेले विश्वका अन्य कम्पनी भन्दा राम्रो कमाई मात्र गर्दैनन्, यहाँको काम गर्ने माहौल समेत निकै फरक र गज्जबको हुन्छ । हो, विश्वकै यी दुुई उत्कृष्ट कम्पनीमा अहिले जागिर खुलेको छ । यदि तपाईसँग उनीहरुले...
फेसबुकले आफ्नै मालिक मार्क जुकरबर्गलाई श्रद्धाञ्जली दिएपछि.............!!!
काठमाण्डौ । फेसबुकले आफ्नै मालिक मार्क जुकरबर्गलाई मृत घोषित गरिदिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठुलो यो सामाजिक सञ्जालमा जुकर बर्गको मात्र होइन, अन्य २० लाख व्यक्तिको समेत मृत्यु भएको खबरले सनसनी मच्चायो । यो खबरबाट जिउँदा मानिसहरु आफ्नै मृत्युको खबर र आफ्नो फेसबुक वालमा आएको श्रद्धाञ्जली सम्बन्धी म्यासेजका कारण ठुलो हैरानीमा परे । तर...